( ကျမ အိမ်ပြန်တော့မယ် မောင် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ကျမ အိမ်ပြန်တော့မယ် မောင် )	17
( ကျမ အိမ်ပြန်တော့မယ် မောင် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on May 22, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 17 comments
ဒီနေရာရောက်ခါစ အူတူတူ ကျမ
စတွေ့တဲ့မောင့်ကို ကျမ ဘယ်မေ့ပါ့မလည်းမောင်
ကျမ အိမ်ပြန်တော့မယ် မောင်
ရွာက ကျမမောင်လေး ပညာရေးအတွက်
ကျမဘဝအတွက် ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ မောင့်အနမ်းတွေ
ဒီလောကသားထဲမှာ ရှားလှပါတယ် မောင်
အမေ့အိမ်ကလေး ဖျက်ပေးလိုက်ရသတဲ့ မောင်
အိမ်ပိုင်ရှိတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းသားနဲ့ ကျမကို ပေးစားမတဲ့ မောင်
စာမတတ်လှရှာတဲ့အမေ့ခမျာ ကံပေးရာပေါ့လေ တဲ့
မတွေးဘူးတဲ့ဘဝ ကျမ ရောက်ခဲ့ပြီးသလို
ကျမ မဖက်ချင်သူကို ဖက်ရဦးမှာလား မောင်
ယောင်ချာချာအတွေးတွေထဲမှာ ဘယ်သူ့ဘဝက အဆိုးဆုံးလဲ ? မောင်
ကျမ အိမ်ပြန်တော့မယ် မောင် ၊
တောင်ပေါ်သား 007 has written 199 post in this Website..
View all posts by တောင်ပေါ်သား →	Blog
ခင်ဇော် says: အဲလာ ဘယ်သူလဲ ငင်
တောင်ပေါ်သား says: စာကို စာလို ကဗျာကို ကဗျာလို သဘောထားပါကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ခင်ဇော် says: သများ မေးတာ ဓာတ်ပုံကို မေးတာ။.။ဟေးဟေးဟေး
ဟို မပြီးသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက တစ်ယောက်မှတ်လို့။
တောင်ပေါ်သား says: သိတာရယ် စိတ်ကူးယဉ်ရယ် ပေါင်းထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါကွယ်
၁၀၀ % ကိုယ်တွေ့ဟုတ်ဘူးနော်
Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တစ်ဝက်တစ်ပျက် တော့ ပါတယ်ပေါ့။
သနပ်ခါး အဖွေးသား နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းသူ လေး က ဘာလို့ ပါနေတုန်း ကိုမျိုးရ။ :-))
Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အရီးရယ်
ရွာပြန်သွားတာ သူပဲလေ ၊
တစ်ခြားလူပုံ ကျနော် ဘယ်တင်ရဲမလည်းဗျာ
Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: နေညိုချိန် အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့
မြစပဲရိုး says: လွမ်းရပြန်ပြီလား ကိုမျိုး ရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ပါဘူးအရီးရယ်
အောင် မိုးသူ says: မောင်ဆို အသံတောင် မကြားချင်….။ စာသားလည်း မမြင်ချင်တော့ဘူး။ ကဗျာလေးကိုတော့ ဖတ်သွားတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: ဟို မောင် တွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဗျာ
Mike says: .လူဆိုတာ အချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ရတာပဲလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ပ ကိုမိုက်ရေ
Aung Naing says: ကို အ၇မ်း လွမ်း တယ်
သီ ချင်း။ဆို နေ ပါ
တောင်ပေါ်သား says: YES SIR Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: အဲလောက်ကြီး”မောင်”ကို..တမ်းတ..ပြောပြနေမှတော့…
ဆွဲထားလိုက်ရောပေါ့”တောင်”… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.
Comments By Postဘာရယ်ဟုတ်ဘူး... - ဇီဇီ - Thint Aye Yeikနေ့ ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ အေးချမ်းလတ်ဆတ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရမယ့် ရွှေပြည် - Thint Aye Yeik - ko sixမြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း - Thint Aye Yeik - kaiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body(0:2) - kai - Ma Eiမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - ko six - ကျော်လွင်ဖြိုးအဝင်ကော - ko six - Mr. MarGaအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - ko six - kaiအားနာလွန်းလို့ ပါ - ko six - တောတွင်းပျော်သူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - surmi - ဦးကြောင်ကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Tawwin Pan - Foreign Residentအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Tawwin Pan - Thint Aye Yeikကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ကျော်လွင်ဖြိုး - kaiချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - aye.kk - ဇီဇီဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - Thint Aye Yeik - Mr. MarGaဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်"ပြည့် " - Thint Aye Yeik - aye.kk" ဟိုမှာဒီမှာ " - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Mr. MarGa - Mr. MarGa"ေ ကာက်ရိုးမီး" - weiwei - kaiကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - kai - etoneကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - kai - ko sixခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၃)- အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် - Thint Aye Yeik - ko six''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီCategory	Arts & Humanities